HIM | Health in Myanmar » 2015 » January
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: ART, HIV, အခွင့်အရေး, အမျိုးသမီး
မြန်မာပြည်တွင်းက HIV/AIDS နဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။ UNESCAP ရဲ့ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ AIDS ကင်းစင်ရေး အတွက် ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း ဘန်ကောက်မှာ လုပ်တဲ့ အာရှပစိဖိတ် ညီလာခံကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ က တက်ရောက်လာသူတွေက ဒီမျှော်မှန်းချက်ပြည့်မှီရေး အတွက် အားသွန် ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ကတိက၀တ်ပြုသွားကြပါတယ်။
Red angels in the morning mist
Whenever I read something like “Golden pagodas rise in the morning mist along the hills” I know I am likely to find something out of Kipling rather than solid information about Myanmar. But you gotta love hardworking midwives. Isafifty per cent decrease in malaria cases or deaths 2010 in Myanmar through 2013 entirely […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: 7day, AIDS, HIV, PLH, ကလေး, အခွင့်အရေး
အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ရေရှည်အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မိခင်မှ ကလေးသို့ ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ကာကွယ် တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ/အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူ အဖွဲ့အစည်းအချို့က အကြံပြုပြောကြားသည်။
A peer educator for PWID
This article sets out the dilemmas faced by people who inject drugs who are also peer educators. They are suspected of promoting drugs by the community, of using or dealing by the police, and of informing by other users. One has to admire them for continuing their lifesaving work in such an atmosphere of distrust. […]
Did Al Jazeera TV just report that one in five hospital admissions in Myanmar are due to measles? Campaigns work, butahealth system that readily delivers routine immunisations is needed. Jamie ++++++++++++++++++ Myanmar launches its largest ever vaccination campaign,reaching 17 million children Unicef 19 January 2015 19th January 2015, Nay Pyi Taw: The National […]
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: ပညာပေး, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ပုံမှန် ယောက်ျား-သုက်ရည်ဟာ အဖြူနဲ့ မီးခိုးရောင်စပ်ကြားမှာ ရှိတယ်။ တခါတလေ နဲနဲဝါတယ်။ ပန်းရောင်ရှိတယ်။ အနီရောင် ဖြစ်နေရင် သွေး ပါနေလို့ပါ။ ကျားအင်္ဂါကနေ ထွက်တာနဲ့ သုက်ရည်က ခဲလာတော့ ပြစ်ချွဲလာတယ်။ ၅ မိနစ် ကနေ နာရီဝက်မှာ ပြန်ပြီး အရည်ဖြစ်တယ်။ အဲလိုမဖြစ်ရင် ကလေးရနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေတယ်။ ပျမ်းမျှဆိုရင် တခါသုက် ထွက်တာက ၂-၅ စီစီ (မီလီ-လီတာ) ရှိတယ်။ သုက်မလွှတ်တာ ကြာရင် များပြီး၊ ခဏခဏ ထွက်ရရင် နည်းမယ်။ ရောဂါ မဟုတ်ပါ။
Eleven Media discovers male sex work in Yangon
It has beenalong time sincealocal publication has published much on male sex work in Yangon. And this is the first time that I have seen the Theingyizay pedestrian overpasses featured. Ifaman provides paid sexual services then it is not ‘abnormal’. Most of us think thatamale providing paid […]
Malaria article from the Global Fund
Here is an article from the Global Fund. It includes the statement: ‘If resistance were to reach neighboring India or sub-Saharan Africa, where most world malaria cases occur, the public health consequences could be disastrous.’ I agree that artemesisin resistance in India or Africa would beaproblem. But is there any evidence that malaria […]